Samsung Galaxy S6 edge + vs iPhone 6s Plus, ny fampitahana | Androidsis
Samsung Galaxy S6 edge + vs iPhone 6s Plus, iza no hiakatra amin'ny seza fiandrianan'ny tsenan'ny phablet?
Alfonso de Frutos | | About us, hevitra, Samsung
Apple dia namoaka ny findainy smartphone vaovao: ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus, fitaovana roa antsoina hoe andiam-pefy vaovao avy amin'ny orinasa Cupertino. Ny fanontaniana apetraky ny mpampiasa an'arivony dia: finday iza no safidiko, ny iPhone 6s Plus sa ny sisin'ny Samsung Galaxy S6?
Mba hamahana io fanontaniana io dia mitondra fampitahana feno ianao Lavointsika ny iPhone 6s Plus amin'ny sisin'ny Samsung Galaxy S6. Iza amin'ireo titan roa ireo no hitsangana ho phablet tsara indrindra eny an-tsena?
Amin'ny estetika, samy misy ny terminal famaranana kalitaod misy famolavolana tena manintona. Raha ny momba ny iPhone 6s Plus vaovao dia azontsika atao ny manasongadina fa nanamafy ny aliminioma nampiasaina tamin'ny fanamboarana azy i Apple mba tsy hiverenan'ny raharaha bendgate mampiady hevitra intsony.
Misy antsipiriany mahaliana iray hafa momba ny iPhone 6s Plus miaraka amin'ny efijery izay arovan'ny a kristaly miaraka amin'ny teknolojia Ion-X, manolotra fiarovana tsara amin'ny mety ho votra sy ny fiantraikany. Andao hiroso amin'ny sisin'ny Galaxy S6 +.
Ary ilay phablet vaovao misy écran roa miolaka avy any Samsung dia misongadina amin'ny endriny kely kokoa noho ny an'ny mpifaninana aminy, ankoatry ny manify kely kokoa. Okay, ny fahasamihafana eo amin'ny habeny dia tsy be loatra, fa ny sisiny + kosa kely kokoa. Izany dia tsy maintsy ampiantsika fa ny Galaxy S6 edge + dia milanja 153 grama, raha ny iPhone 6s Plus kosa mijanona 192 grama.
Ny vatana iray manontolo amin'ny sisin'ny Samsung Galaxy S6 + dia voaaro amin'ny sosona Gorilla Glass 4, Noho izany dia afaka manome toky isika fa haharitra ireo vongan-tany ary hianjera tsy misy fikorontanana. Ny didim-pitsaranay? Amin'ity lafiny ity dia mandresy ny sisin'ny Samsung Galaxy S6.
Teboka iray hafa izay samy hafa na kely lenta ny telefaona roa. Ny iPhone 6s Plus dia manana fampisehoana Retina HD miaraka amin'ny 3D Touch izay manolotra tsy manam-petra ny fahafaha-manao, satria ity haitao ity dia tafiditra ao amin'ny iOS 9. Ny 5.5 santimetatra dia mahatratra ny 1080p vahaolana, mihoatra ny ampy ho an'ny mpampiasa rehetra.
Raha ny sisin'ny Galaxy S6 + dia Ny takelaka 5.7-inch dia manome vahaolana ho an'ny 2K miaraka amin'ny fampisehoana tena tsara. Iza no tsara kokoa amin'ny efijery roa? Eny, amin'ity fizarana ity amin'ny fampitahana misy antsika ny Samsung Galaxy S6 edge + sy ny iPhone 6s Plus dia mila manome fatorana ara-teknika isika: avelao ny mpampiasa hanapa-kevitra hoe iza no efijery tian'izy ireo indrindra satria ireo terminal roa ireo dia manolotra safidy tena mahaliana amin'ity lafiny ity.
Amin'io lafiny io, ny telefaona roa dia samy manaraka ny andalana iray hafa: ny iPhone 6s Plus dia mampiasa processeur A9 misy fahatsiarovana RAM 2 GB, aryl Samsung Galaxy S6 edge + dia mampiditra Soc Exyos 7420 miaraka amin'ny 4 GB amin'ny RAM.
Talohan'izay, ny sosona Touchwiz manokana dia nahatonga ny Galaxy hijaly noho ny lagy mahasosotra, saingy miaraka amin'ity kinova farany an'ny interface Samsung ity dia voavaha ny olana. Famaranana? Samy miasa toy ny landy ny telefaona roa. Mazava ho azy, ny maodely tsotra indrindra an'ny iPhone 6s Plus dia manana tahiry anatiny 16 GB, raha toa kosa ny kinova Samsung Galaxy S6 marindrano kokoa + dia mampitombo ny fahatsiarovan'ny mpifaninana aminy hahatratra ny fahatsiarovana 32 GB.
Ity dia iray amin'ireo fizarana lehibe indrindra amin'ny telefaona iray, ary samy iPhone 6s Plus sy ny Samsung Galaxy S6 edge + dia manome vahaolana tena mahavariana. Ny fakantsary iPhone 6s Plus dia misy solomaso 12 megapixel mahay mandrakitra horonantsary amin'ny kalitaon'ny 4K.
La Fakan-tsarimihetsika Galaxy S6 edge + Tsy dia taraiky lavitra noho ny 16 megapixels azy io sy ny mety mitovy amin'ny fandraisam-peo ao amin'ny 4K. Amin'ity fizarana ity dia tsy maintsy miandry isika hahita ny tena sary azo atao mba hahafahana manao fampitahana feno kokoa satria, araka ny fantatrao tsara, fa ny telefaona manana megapixels betsaka kokoa dia tsy midika hoe tsara kokoa ny fakantsary.
Mazava ho azy, rehefa avy nizaha ny Galaxy S6 Edge nandritra ny iray volana aho dia afaka manome toky anao fa tsy maintsy nanatsara ny fakan-tsariny i Apple mba nahavita nandresy ilay solomaso mahery nampiasain'i Samsung.
Ary farany manana ny fizarana bateria isika: ny iPhone 6s Plus dia manana bateria 2.915 mAh, raha ny Samsung Galaxy S6 edge + kosa dia mahatratra 3.000 mAh. Fahasamihafana kely indrindra, ankoatry ny hoe mandra-pahatongan'ny fitsapana fampisehoana atao amin'ny iPhone 6s Plus dia tsy ho afaka hamintina famaranana mazava kokoa isika.
Naoty 4.5 kintana Naoty 4 kintana
Notsapainay ny sisin'ny Samsung Galaxy S6 +, telefaona vaovao an'ny Samsung misy tontonana miolaka roa ary efijery 5.7-inch izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo phablet tsara indrindra eny an-tsena
Apple dia nanolotra ny maodely iPhone 6s Plus vaovao. Hodinihinay amin'ny antsipiriany izany ary hizaha raha manana hazo amidy indrindra ianao.
Mazava ny fehin-teninay: ny telefaona roa dia manome fahombiazana mitovy. Izaho manokana dia misafidy ny sisin'ny Samsung Galaxy S6 + amin'ny vidiny ambany kokoa, ny rafitra fiasa ary ny maha-izy azy ny tontonana miolaka roa. Ary ianao, Iza amin'ireo finday roa no tazominao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S6 edge + vs iPhone 6s Plus, iza no hiakatra amin'ny seza fiandrianan'ny tsenan'ny phablet?
aluflipatzen dia hoy izy:
mazava ho azy ny lg g4
Mamaly an'i aluflipatzen
Juan Iquique dia hoy izy:
tsy misy toa ny premium sony z5
Valio i juan iquique
Mai dia hoy izy:
Samsung Galaxy S6 edge + ny tsara indrindra ...
Mamaly an'i Mai
Periscope dia mahazo fanampiana amin'ny fandefasana amin'ny fotoana tena izy amin'ny endrika fizahana
Super Mario Bros ho an'ny Android raha tsy mila emulator